Tababare Hansi Flick oo Koobka Champions League geeyey Matxafka Kooxda Bayern Munich… + SAWIRRO – Gool FM
Tababare Hansi Flick oo Koobka Champions League geeyey Matxafka Kooxda Bayern Munich… + SAWIRRO
(Munich) 09 Sebt 2020. Tababaraha Bayern Munich ee Hansi Flick ayaa Koobka Champions League ee ay dhowaan ku guuleysteen geeyey Matxafka Kooxda reer Jarmal.
Koobkan ayaa ahaa koobkii dhowaan ay Kooxda Bayern Munich ku guuleysatay oo ay ka qaaday naadiga reer France ee PSG.
Bayern Munich ayaa dhowaan markeedii LIXAAD ee taariikhdeeda ku guuleysatay koobka Champions League, kaddib markii ay guul dirqi ah 1-0 kaga qaaday kooxda Paris Saint-Germain, kulankii fiinal-ka ahaa ee ka dhacay garoonka The Estadio da Luz.
Qeybta hore ee final-ka UEFA Champions League ayaa lagu kala maray goolal la’aan 0-0, balse qeybtii labaad gaar ahaan daqiiqaddii 59-aad ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 0-1 ka dhigay wiilka reer France ee Kingsley Coman, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Joshua Kimmich, waana goolka qura oo ay guusha ku qaateen kuna guddoomeen koobkan.
Haddaba Tababare Hansi Flick ayaa Koobka Champions League geeyey Matxafka Kooxda kubadda cagta Bayern Munich, halkaasoo ay ku keydsan yihiin billadaha iyo koobabka ay kooxdu ku soo guuleysatay.
Lionel Messi oo ugu dambeyn maanta tababarka Barcelona kala soo muuqday guud ahaan xiddigaha kale ee Kooxda
RASMI: Kooxda Barcelona oo xaqiijisay Samuel Umtiti uu ka soo kabsaday Korona Fayras